Notapahan’i Satirist Bassem Youssef, ilay Ejiptiana Mpanao Hatsikana, Ny Fifanarahany Tamin’ny Fahitalavitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2013 11:34 GMT
Ity herinandro ity no nahitàna indray andiany vaovao tamin'ny raharaha Bassem Youssef. Indrisy, tsy mba nalefa fahitalavitra na Youtube izy io nefa nanana endrika ara-dalàna. Ny marina, nanambara tao amin'ny pejy ofisialiny Facebook tamin'ny fomba ofisialy ilay mpanao hatsikana sy ny Qsoft mpiara-miasa mpamokatra azy fa nanapa-kevitra ny hamarana ny fifanarahany tamin'ilay fahitalavitra CBC nampiantrano ny fandaharana.
Tany am-piandohan'ity volana ity, nanapa-kevitra ny CBC ny hampiato ilay fandaharana be mpanaraka ao amin'ny fahitalavitra, izay mpijery 30 tapitrisa isan-kerinandro any amin'ny tontolo Arabo no niandry mafy ny fiverenany, amin'ny filazana fa hoe “nanitsakitsaka ny zavatra nifanarahana tamin'ny CBC” ny votoatin'ny fizaràna voalohany taminy.
Khalid Mansour, mpanoratra sy mpilalao hatsikana (izy no mitàna ny toeran'ilay olo-malaza fantatra erantany amin'ny hoe “Gamahir” ao anatin'ilay seho) dia nibitsika ity sary maneso sy miteny ho azy izy :
Tapitra ny lesona, mitapy. #Egypt #مصر pic.twitter.com/bLMrjtS973
— Khalid Mansour (@KhalidMans) 17 Novambra 2013
Efa somary nahian'ny sasany ihany ilay vaovao, antony iray hanantenana aza ilay izy. Isan'ireny ilay talem-pamokarana sarimihetsika , Ahmad Abdallah, izay nibitsika hoe [ar] :
Antenaiko fa raha namarana ny fifanarahany tamin'ny CBC i Bassem Youssef, dia ho alefany ao amin'ny Youtube amin'ny fampiasàna ny lisansa Creative Commons ilay fizaràna voasakana mba hahafahan'ny fantsona rehetra mampiseho azy.
Manam-panantenana ihany koa i Bassem Sabry, mpanoratra :
Tena antenaiko mafy tokoa fa ho fiandohanà vanim-potoana iray ho an'i Bassem Youssef ity fa tsy sanatria ho ny fiafaràny. Azony atao tsara ny ho tonga amin'izany.
— Bassem Sabry باسم (@Bassem_Sabry) 17 Novambra 2013
Ny tenifototra [ar] #واحشنا_يا_باسم #WeMissYouBassem MalaheloAnaoZahayBassen no maneho ny hetahetan'ireo Ejiptana mpampiasa Twitter hahita ny fiverenana haingan'i Youssef. Keizer, mpanao taokanto an-dalambe, dia nanolotra ny sary iray nataony mba ho an'i Bassem, izany dia mizotra mankany amin'ny fanehoana hoe mbola avo dia avo ny lazan'i Bassem na dia vao indray mandeha monja aza no niseho fahitalavitra hatramin'ny nanombohan'io andiany io :
Natokan'ilay Artista Keizer ho an'i Youssef ny iray tamin'ireo sary nataony.